आइतबार दुर्लभ सूर्यग्रहण : कुन राशिको मान्छे बाहिर ननिस्किएको राम्रो ? « News of Nepal
रोहिणी घिमिरे ।
पक्कै पनि ग्रहण लाग्नु पृथ्वीवासीका लागि अनुकूल होइन । आकाशीय पिण्ड अर्थात् ग्रह–ताराहरुको नियमित प्रभाव पृथ्वीमा परिरहेको हुन्छ । सूर्यको प्रभावको त लेखाजोखा नै नगरौँ । पृथ्वीमा रहने हरेक वनस्पति र प्राणीका लागि सूर्य जीवनदायिनी शक्ति हो । त्यसैले नियमित प्रक्रियामा आइरहेको सूर्यको प्रकाशमा ग्रहण लागेपछि के होला ?
आइतबार इतिहासकै दुर्लभ सूर्यग्रहण लाग्ने भएको छ । यसलाई किन दुर्लभ ग्रहण भनिएको हो त ?एक त सूर्यलाई झन्डै ९० प्रतिशत ढाक्ने गरी लाग्ने ग्रहण, अर्को बार पनि रविवार अर्थात् सूर्यकै बार परेको छ । साथै ग्रहणका समयमा दुई नक्षेत्र (मृगशिरा र आरद्रा) परेका छन् । यस्तो विरलै पर्ने हुँदा दुर्लभ भनिएको हो ।
यो विशेष किसिमको ग्रहण भएकाले कोरोना महामारीले आतंकित बनाइरहेका बेला झनै अन्य प्राकृतिक विपत् आउने हो कि भन्ने भन्ने भय एकातिर छ भने अर्कोतिर ग्रहणपछि सबै कुरा मत्थर हुँदै जान्छ कि भन्ने झीनो आशा पनि पलाएको देखिन्छ ।
वैज्ञानिक दृष्टिमा ग्रहण लाग्नु खगोलीय एक घटना हो तर यस बेला पृथ्वीमा नकारात्मक विकिरण प्रवाह हुने कुरा वैज्ञानिकले पनि स्वीकारेका छन् । यस विकिरणले मानवस्वास्थ्यमा नराम्रो असर गर्छ । त्यसैले सोझै आँखाले ग्रहणतिर हेर्नुहुँदैन ।
आइतबारको सूर्यग्रहण बिहान १०ः५० बजेदेखि दिउँसो २ः२३ बजेसम्म रहन्छ । यस अवधिमा निदाउनुहुँदैन । यदि निदायो भने रोग लाग्छ भनिएको छ । त्यस्तै सकेसम्म दिसा–पिसाब गर्नुहुँदैन । खानपान गर्नुहुँदैन । सम्भोग गर्न हुँदैन । गर्भिणीले घरबाहिर निस्कनु झनै राम्रो मानिदैन । पूर्वीय संस्कृतिका यी मान्यतामा वैज्ञानिकता छ । ग्रहण लागेको समयमा आउने विकिरणले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले हामीले सजग हुनु नै कल्याण हुन्छ ।
आइतबार सूर्यग्रहण लाग्ने हुँदा चोरी, डकैती, महामारीजस्ता घटना वृद्धि हुने दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघ, नेपालका महासचिव ज्यो. सुरेशचन्द्र रिजाल न्युज अफ नेपाललाई बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार विगतका घटनामा भएका ग्रह अवस्थितिको विश्लेषण गर्दा भूकम्प एवं हवाई दुर्घटनाको सम्भावना पनि देखिन्छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘गत पुसमा सूर्यग्रहण परेको थियो । त्यसैबेलादेखि कोरोना महामारी फैलिँदै आएको हो । अब यस सूर्यग्रहणपछि कतै यस महामारीको औषधि निस्किन्छ कि भन्ने आश पनि गर्न सकिन्छ ।
यसपालिको सूर्यग्रहण मिथुन राशिमा लाग्ने र राहु पनि मिथुन राशिमा भएकाले राहु मिथुन राशिबाट ननिस्केसम्म परिस्थिति अनुकूल हुँदैन । यस प्रसंगमा भारतका ज्योतिषाचार्य डा. राजनाथ झाले एक अनलाइन मिडियामा उल्लेख गरेका छन्– राहु मिथुन राशिबाट निस्किएपछि परिस्थिति बिस्तारै अनुकूल हुँदै जान्छ ।
पूर्वीय ज्योतिष सिद्धान्तअनुसार राहु–केतुकै कारण ग्रहण लाग्ने हुन्छ । त्यसैले राहु मिथुन राशिमा रहुन्जेल परिस्थिति अनुकूल नहुन सक्ने देखिन्छ । राहु आगामी भदौ २५ गते वृष राशिमा सर्छ । त्यसपछि कोरोना महामारी पनि साम्य हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।